အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - လန်ဒန် BVE 2019 မှာ Interra စနစ်များ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » လန်ဒန်မြို့ရှိ BVE 2019 မှာ Interra စနစ်များ
OTT ဗီဒီယိုကိုစားသုံးမှုကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သကဲ့သို့, ကမ္ဘာအဝှမ်းမှဝန်ဆောင်မှုပေးယှဉ်ပြိုင်ကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားနှင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူစိတ်ကျေနပ်မှုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေပါသည်။ အဘယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာမယ့်: ဝန်ဆောင်မှုပေးအရည်အသွေးမြင့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံပူဇော်ရပါမယ်, အ streaming များပတ်ဝန်းကျင်တွင်အောင်မြင်ဖို့ရန်။
BVE 2019 မှာ, Interra စနစ်များ OTT ဝန်ဆောင်မှုပေးတိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်ခြွင်းချက်အသံ-ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးကယ်မနှုတ်နိုင်ပုံကိုဖေါ်ပြခြင်း, ဖိုင်-based Workflows အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအာမခံချက်၎င်း၏သည်မိုဃ်းတိမ်နှင့် On-ဝုဏ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ , စုစည်း QC ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများစောင့်ကြည့်ကျော်လွန် Interra စနစ်များ အတုထောက်လှမ်းရေး (AI အ) တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်လည်းပြသမှာပါမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မည်သည့်စက်-သင်ယူခြင်း (ML) နည်းစနစ်အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဖြေရှင်းချက်အာကာသအတွင်းပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
အသစ်! လေးစားလိုက်နာခြင်း, ခွဲခြားရေးနှင့်အမြိုးအစားခှဲခွားခွငျးအဘို့အလှေ့
Interra စနစ်များ လှေ့, ဗီဒီယိုလိုက်နာမှု, ခွဲခြားနှင့်အမျိုးအစားတစ်ခု AI- နှင့် ML-based နည်းပညာနှင့်အတူ၎င်း၏တီထွင်မှုနေဆဲဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ-သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. ဤကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ခိုင်ခံ့သောဘာသာစကားအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မြင်ကွင်းများနှင့်ရုပ်ပုံများကို detect နှင့် tag နိုင်ပါတယ်လှေ့။ ပေါ်အခြေခံကာ Interra စနစ်များ'' ကျယ်ပြန့်ကွန်ပျူတာရူပါရုံကိုနှင့် ML နည်းပညာများအသိအမှတ်ပြု, လှေ့ဗီဒီယိုအားဝန်ဆောင်မှုပေးကွဲပြားခြားနားသောပထဝီဝင်နယ်မြေများကိုဖြတ်ပြီးပစ်မှတ်စျေးကွက်အဘို့မိမိတို့အကြောင်းအရာချောမွေ့ကူညီပေးသည်။ လှေ့နှင့်အတူသုံးနိုငျ Interra စနစ်များ'' တုတ်တစ်ခု automated QC ထုတ်ကုန်, မိုဃ်းတိမ်နှင့် On-ဝုဏ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ဖြန့်ကျက်ထောက်ခံပါတယ်။
Automated, မျက်မှောက်ရေးရာ QC အဘို့အတုတ်
တုတ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းလှေ့, content တွေကိုလိုက်နာမှု, ခွဲခြားနှင့်မှတ်ပုံတင်များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏စနစ်သစ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထောက်ခံပါတယ်။ အပိုဆောင်း features အသစ်တွေကိုစမ်းသပ်အစီအစဉ်များ, တာဝန်များကိုနှင့်အစီရင်ခံစာများအဘို့အ REST API ကိုထောက်ခံမှုများပါဝင်သည်; ဗွီဒီယိုချုံ့ရမှတ်များ, HDR ကိုအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးမှုများ; အမေဇုံမိုဃ်းတိမ်၌ / On-ဝုဏ်အတွင်းတုတ် setup ၏အလိုအလျောက်စကေး; DRM နည်းစနစ်များနှင့်အဆင့်မြင့်အသံဘာသာစကားထောက်လှမ်းစွမ်းရည်များအတွက်ထောက်ခံမှု; ကျယ်ပြန့်, P2 အထုပ်အသစ် format နဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ, AVC-အချင်းချင်းအပြန်အလှန်, WebM, Vorbis, နှင့်ပိုပြီး DCP အကြောင်းအရာ encrypted ။
တုတ် ABR နှင့် Orion Suite: OTT Delivery အဘို့, အရွယ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ချွေ Solutions
အဆိုပါ BVE 2019 ရှိုးမှာ, Interra စနစ်များ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုပို့များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံစံနှုန်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တုတ် ABR နှင့် Orion-OTT ဖြေရှင်းနည်းများ, Spotlight ပါလိမ့်မယ်။ တုတ် ABR နှင့် Orion-OTT စားသုံးမိရာမှဖြန့်ဖြူးအချက်များမှ VOD အကြောင်းအရာနက်ရှိုင်း QC နှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်။ ပို့လိုက်ကြတယ်မှတဆင့်ဧည့်သည်ကိုဘယ်လိုတုတ် ABR ရဲ့ပြည့်စုံစေ့စပ်ကျူးမှာစစ်ဆေးမှုများနှင့် Post-transcode အဆင့်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်, Orion-OTT ရဲ့ပြည့်စုံသော, ပို့ဆောင်မှု-တိကျတဲ့စစ်ဆေးမှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ, တိုင်းကိရိယာပေါ်တိုင်းစီးဘို့ခြွင်းချက် QoE အလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။ streaming တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အဘို့, Orion-OTT အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်အသံ-ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူ ABR လိုက်နာမှုများအတွက်စီး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် high-performance ကိုပလက်ဖောင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီဖြေရှင်းချက် suite ကိုလည်းသရုပ်ဖော်စာတန်းများကိုကြော်ငြာစိစစ်အတည်ပြု / လိုက်နာမှုနှင့် DRMs ထောက်ခံပါတယ်။
Orion-OTT ယခု Windows နှင့် Linux ကို Operating System ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအရရှိနိုင်ပါသည်။
Interra စနစ်များ'' OTT ဖြေရှင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့တိုးမြှင့်ထိရောက်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေး, မိုဃ်းတိမ်၌သို့မဟုတ် On-ဝုဏ်အတွင်းတပ်ဖြန့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ၏ Orion 24 / 7, IP ကို-based အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် Real-time စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ဖြင့်ပြည့်စုံသောအခါ, တုတ် ABR နှင့် Orion-OTT ထုတ်ကုန်အစုံသာလွန်အရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှုများကို streaming များအတွက်စုစုပေါင်းဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူထုတ်လွှင့်ပေးထားပါသည်။
စံချိန်စံညွှန်းလေးစားလိုက်နာခြင်း, Vegas မီဒီယာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူ Debugging အာမခံ
Interra စနစ်များ'' Vegas ™မီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေရှင်းချက်စံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာမှု, ဒီဘာဂ်နှင့်ကုဒ်သွင်းစီး၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ PCAP စီး, အ Vegas မိသားစုမှမကြာသေးမှီက updates များကို, Window 1, နောက်ဆုံးပေါ် HEVC HM ရည်ညွှန်းကုဒ်များအတွက်ထောက်ခံမှု AV10 ပုံစံ၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်သည်, HEVC-ယှက်စီး, VP9 စီး (4 2: 2: 4, 4: 4) , WebM, Als နှင့်အသံ, Dolby AC-4 အသံနှင့် AVS Plus အားဗီဒီယိုက။ Vegas ABR ဆော့ဖ်ဝဲ, In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပါသည်ဒီဘာဂ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသော ABR ၏ troubleshooting ဖြေရှင်းချက်မှုကိုထငျရှားစဖိုင်တွေနဲ့မျိုးကွဲများ၏အရည်အသွေးနှင့်သမာဓိရှိစစ်ဆေးနေများအတွက်မရှိမဖြစ် tool ကိုအောင်, စီး။
Interra စနစ်များ အဆိုပါခွဲခြား, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (QC) လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးကွင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်မှုချောမွေ့ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-class ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ မှီခို Interra စနစ်များ'' ပြည့်စုံသောဗီဒီယိုထိုးထွင်းသိမြင်, မီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, အတှေ့အကွုံအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုကယ်နှုတ်တော်မူသစ်ကိုစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြေရှင်းရန်နှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျယ်ပြန့်ထုတ်လွှင့်, cable Telco ကမွေးစား, ဂြိုဟ်တု, IPTVကမ္ဘာတဝှမ်း, OTT နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်များ, Interra စနစ်များ'' ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပိုကောင်းဗီဒီယို, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှလျှော့ထိတွေ့မှုများနှင့်မြင့်မားသောဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကို enable ။ တစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ဗိသုကာနှင့်အတူနှင့်စက်သင်ယူမှု-enabled algorithms - အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကို featuring Interra စနစ်များ'' ဖြေရှင်းနည်းများပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ထိရောက်မှုအဘို့, မိုဃ်းတိမ်အပါအဝင်ဖြန့်ကျက်အခြေအနေတွေ, အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်တုတ်, စံ automated QC ကျော်လွန်ပြည့်စုံစွမ်းရည်လမ်းကယ်တင်မယ့်မျိုးဆက်သစ်ဟိုက်ဘရစ် QC ဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည်; Orion နှင့်မြင့်မားသော QoE အာမခံ Orion-OTT Real-time အကြောင်းအရာမော်နီတာ; ကုဒ်သွင်းစီး၏လိုက်နာမှုနှင့်ဒီဘာဂ်နှင့် Vegas မီဒီယာဖြာ။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.202comms.com/InterraSystems/190131InterraSystems.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/InterraSystems/InterraSystems-BatonQC.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Interra စနစ်များ'' BATON® Automated, ဖိုင်မှတ်တမ်း-အခြေပြုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဖြေရှင်းချက်
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/InterraSystems/InterraSystems-EndToEndMonitoringWorkflow.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Interra စနစ်များ'' အဆုံး-to-end OTT စောင့်ကြည့်ဖြေရှင်းချက်
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/InterraSystems/InterraSystems-VegaMediaAnalyzers.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Interra စနစ်များ'' Vegas ™မီဒီယာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
BVE 2019 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
လိုက် Interra စနစ်များ:
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ BVE 2019 မိုဃ်းတိမ်ကို ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု Interra စနစ်များ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော လန်ဒန် On-ဝုဏ် OTT အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် ဖြေရှင်းချက် လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုစားသုံးမှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-01-31
ယခင်: အလုပ်မှာမိုက်ခရိုဝေ့ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ် V-Band ကြိမ်နှုန်း Converter မိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: CALREC'S BRIO SCETV ကို AT အတန်းထိပ် IS